ခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်းစက်ရုံ - တရုတ်ခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Body Butter - ခန္ဓာကိုယ်အစိုဓာတ်ကို Shea Butter ဖြင့်ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း
1.SCENT - Vanilla နွေးထွေးသောသစ်ခွနှင့်အတူသစ်ခွသစ်ခွသည်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ရနံ့ကိုပြသနိုင်သည့်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အနံ့ဆိုးသစ်တောများနှင့်ကြွယ်ဝသောသစ်သီးခွံများသည်အရေပြား၏သဘာဝရနံ့ကိုဖော်ထုတ်ပေးသည်။ Art-deco မှုတ်သွင်းထားသောပုလင်းသည်အမွှေးအကြိုင်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ၂. SPA ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်တွင် -180ml Body Butter ပါရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၌ထောပတ်ထည့်ခြင်း - စက္ကူသေတ္တာအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းဖော်ပြချက် - •အသားအရေကိုအာဟာရဖြစ်စေသည့်လှပသောခန္ဓာကိုယ်မှခရင်မ်•အသားအရေကြွယ်ဝသောအသားအရေသည်အလင်းအားဖြင့်နက်ရှိုင်းစွာဂရုစိုက်သည်။
နှင်းဆီကို Hydrating ခန္ဓာကိုယ်၏အဆီအနှစ်များအတွက်အရေပြားနူးညံ့။ ပျော့ပျောင်းသောအရေပြားအတွက်အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း
1. ရနံ့ - Rose Rose ဆီသည်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ၂. SPA ပြည့်စုံသောလက်ဆောင်တွင် ၁ ဝ ၁ ဝမီလီမီတာခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကော်လာပုံနှိပ်စက္ကူသေတ္တာဖော်ပြချက်ဖော်ပြချက် - အသားအရေကိုအာဟာရဖြစ်စေသည့်လှပသောခန္ဓာကိုယ်မှခရင်မ်•အသားအရေကြွယ်ဝသောအသားအရေသည်နူးညံ့သောထိတွေ့မှုနှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာဂရုစိုက်ပေးသည်။ ချောချောမွေ့မွေ့•အပန်းဖြေ lavder နှင့်အတူထုံမွှန်း•အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်သင့်လျော်သောအစိုဓာတ်ကိုခရင်မ် ...
Shea Body Butter - လိမ္မော်ရောင် Shea Butter Body Lotion
ရနံ့ - Lavender Lavender သည်အသားအရေနှင့်အာရုံများကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေရန်ဂရုတစိုက်ရောစပ်ထားသည်။ ပြည့်စုံသော SPA GIFT SET တွင် -180ml Body Butter ပါရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၌ Butter Butter ပါရှိသည်။ ကော်လာပုံနှိပ်ခြင်းစက္ကူသေတ္တာဖော်ပြချက် - အသားအရေကိုအာဟာရဖြည့်ပေးသောလှပသောနှုတ်ခမ်းနီခန္ဓာကိုယ်။ •ကြွယ်ဝသောအသားအရေစိုပြေစေခြင်းဖြင့်အလင်းထိတွေ့မှုဖြင့်ဂရုတစိုက်ဂရုစိုက်ပေးသည်။ •အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်သင့်လျော်သော Moisturizing Cream သည်အသုံးပြုခြင်း - ခန္ဓာကိုယ်၊ လက်နှင့်ခြေထောက်များကိုညင်သာစွာလိမ်းပေးပါ။ အက်ပ ...